အသိမှန်ရှိဖို့လိုပါမည်၉၆၉ နှင့် ၇၈၆ ၀ိရောဓိပြသနာ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အသိမှန်ရှိဖို့လိုပါမည်၉၆၉ နှင့် ၇၈၆ ၀ိရောဓိပြသနာ။
အသိမှန်ရှိဖို့လိုပါမည်၉၆၉ နှင့် ၇၈၆ ၀ိရောဓိပြသနာ။
Posted by gwa toe on Mar 10, 2013 in Copy/Paste | 23 comments
ဒီပြသနာက ဘာသာရေးကို နွယ်လာတဲ့ အမျိုးသားရေးပြသနာလို့ မြင်ပါတယ်။ ပြသနာတခုကို ကြည့်တဲ့နေရာမှာ ရှုထောင့်တခုတည်းကကြည့်ရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့အဖြေပဲရတယ်။ အဖြေမှန်လိုချင်ရင် အလုံးစုံခြုံငုံသုံးသပ်ရပါတယ်။ ကဲ ပြသနာရဲ့အရင်းမြစ်ကိုကြည့်ရအောင်။ ၉၆၉ ဆိုတာဘာလို့ပေါ်လာလဲ။ ၇၈၆ နဲ့တဖက်သတ်အကျိုးစီးပွားကြောင့်ပေါ်လာတာ။ အရင်ကသူ့ဟာသူနေတာဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ခုပြောတာမှာ ဥပဒေလွှမ်းမိုးမှုဆိုတဲ့စကားလုံးပျောက်နေတယ်။ လဝက ဥပဒေအသက်မဝင်တော့ ပြည်ပဝင်တဲ့ဘင်္ဂလီပြသနာစဖြစ်တယ်။ ကျူးကျော်သူကခြေကုပ်ဖို့လုပ်ဆောင်တာ နဲ့ ကာကွယ်သူတွေရဲ့ ကာကွယ်ရေးဗျူဟာလို့မြင်ပါတယ်။ ဒီတော့ဘာသာရေးနဲ့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနွယ်ပြီ။ သေနတ်ကိုင်တိုက်မှစစ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ မတူတဲ့အတွေးခေါ် ယုံကြည်မှု ယဉ်ကျေးမှုတွေထိပ်တိုက်တွေ့တာလည်း စစ်ပွဲဖြစ်နေတာပဲ။ ဒီတော့ မူရင်းကာကွယ်သူတွေမှာဘာရှိလဲ အမျိုးသားရေးအသိစိတ်နဲ့ပဲ စောင့်ရှောက်ကြရတယ်။ အဲလိုပြသနာတွေအတွက် ဘာသာရေးနဲ့ အမျိုးသားရေးယှဉ်တွဲအသက်ဝင်လာတယ်။ ပြည်တွင်းမူဆလင်အချို့နဲ့ ထိုင်လုံလိုချင်သူတွေက မူဆလင်ဘာသာနဲ့မူဆလင်လူမျိုးရောပြီး အစွန်းရောက်ဆန်တဲ့ပုံစံနဲ့ လူ့အခွင်းရေးစကားလုံးကိုတွင်တွင်သုံးပြီး ဝင်ပါလာတယ်။ ဒီတော့ တန်ပြန်တဲ့ အမျိုးသားရေးလက္ခဏာတွေ Socialism ဖြစ်လာတယ်။ ဒီထက်ပြင်းလာရင် Facic မူတောင်ဖြစ်လာမယ်။ ဒီတော့ အမျိုးသားရေးကို ဘာသာရေးနဲ့ခွဲခြားသိဖို့လိုသလို ဖြေရှင်းချင်ရင် ပြသနာဆိုတာလည်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ ဘာသာရေးပြသနာတခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံသားပြုမှုမှာ ဥပဒေလွှမ်းမိုးအရေးယူမှု အားနည်းလို့ဖြစ်လာတဲ့ မလုံခြုံတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အမျိုးဘာသာသာသနာအားနဲ့ စောင့်ရှောက်တန်ပြနမှုလို့မြင်ပါတယ်။ ဒီပြသနာမရှိအောင် လုပ်နိုင်တာနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်။ ပြည်တွင်းနေမူဆလင်တွေ အများပြည်သူသံသယဖြစ်နိုင်တာကိုဆင်ခြင်ပြီးပြည်ပစိမ့်ဝင်ပြသနာတွေမှာ ဘာသာနဲ့မနွယ်ဖို့နဲ့ ဥပဒေလွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့လို့ပဲ သုံးသပ်မိပါတယ်။ ပြသနာတခုကို စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာ ရှုထောင့်စုံကကြည့်ပြီးမှ သုံးသပ်ချက်လုပ်ရင် ပိုပြည့်စုံမယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင် မိလိန္တမင်းနဲ့ အရှင်နာဂသေနတို့ရဲ့ အမေးအဖြေတွေ ဘာလို့ပေါ်လာလဲဆိုတာ သိကြပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ ထေရဝါဒကိုးကွယ်သူရဲ့ ဝိပသနာဥာဏ်စဉ်တည်ဆောက်တာနဲ့အတူ ပရိယတ် ပရိပတ် တွေမရှိရင် ထေရဝါဒမရှိတော့ဘူး။ သကျသာကီဆိုတာ ဗုဒ္ဓကိုးကွယ်တာကိုလိုက်သတ်တော့ တွေ့မိတွေ့ရာမြက်ကိုကိုင်ထားပြီး မုသာဝါဒမပြောချင်တာနဲ့ မင်းကဘာလဲဆိုတော့ မြက်ကိုပြပြီး သကျ လို့ပြောတာကစတာပဲလေ။ သာကိုးကွယ်တာ ယုံကြည်တာ သာသနာပြုတာ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်တာ ကျင့်ကြံအားထုတ်တာ အားလုံးဟာ တခုကိုတခု အမှီသဟဲပြုနေကြတာပါ။ သီးခြားစီမဟုတ်ပါဘူး။ တခုမှာအားနည်းရင် ကျန်တာတွေပါလိုက်ပါအားနည်းတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ မိမိဘာသာအပေါ်မှာ သရဏဂုံတည်ရင် သာသနာသုံးရပ်လုံးကို ချိတ်ဆက်ရပါတယ်။ ဒါ အစဉ်ဆက် ဗုဒ္ဓဘာသာတည်အောင်ထိန်းခဲ့ကြတဲ့ အနေထားပါ။
ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် ဒီထက်ဒီမိုကရေစီကျတာမရှိတော့ဘူး။ ဗုဒ္ဓက ငါဘုရား၏တရားတော်ကိုပင် မျက်စိမှိတ်မယုံနှင့် ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံအားထုတ်ကြည့်ပြီး မှန်တယ်လို့လက်ခံမှယုံလို့ ပြောခဲ့တယ်။ ခုလိုပြသနာတွေမှာ လုပ်ရပ်အားလုံးကို သုံးသပ်ခွင့်ပေးထားတယ်။ ဘာသာခြားတွေကိုကြည့်ပါ ဝါဒတူရင်ဝိုင်းကြတယ် သူတို့ချင်းအမြင်မတူရင် မပါပဲနေတာရှိမယ် လိုက်မကန့်သလို သူများကိုမထောက်ခံဘူး။ အဲတာ သူတို့ဘာသာစည်းကမ်းပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာက ပြန်ဝေဖန်ခွင့်ပြုတယ် ဘယ်လောက်လွတ်လပ်သလဲ။ ဘာသာရေးရယ် အမျိုးသားရေးရယ် ဘာသာရေးနဲ့နွယ်တဲ့အမျိုးသားရေးရယ် ဒါတွေကိုတော့ ကျင့်ကြံသူသဘော ကိုယ့်သဘောကိုယ်ဆောင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ပြသနာအားလုံးရဲ့အဖြေကတော့ ရှိပြီးဥပဒေတွေ လွှမ်းမိုးမှုအားနည်းနေသေးတာပါပဲ။ အစိုးရလည်းဒါတွေသိလို့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနဲ့ နိုင်ငံတကာ image ကိုထိန်းပြီးလုပ်နေရတာဖြစ်မှာပါ။
မှန်ပါ့ဗျား…၇၈၆ တွေ တောက်လျှောက် ချိတ်ထားကြတုန်းက ဘာမှ မဟကြပဲ အခု ၉၆၉ ချိတ်မှပြောလိုက်ကြတာ စုံနေတာပဲ…ဘာလို့ချိတ်ရတာလဲ…ကာကွယ်ဖို့ ချိတ်ရတာပေါ့ဗျာ…အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော် တူညီတဲ့ ဥပဒေအောက်မှာ အကုန်ညီညီမျှမျှ ချိတ်ခိုင်းသင့်တယ်ဆိုပြီး ရေးရတာပါ…မပေါ့ကြနဲ့ဗျို့..ဘာသာပျောက်မှာတကယ်ကြောက်နေရပြီဗျို့…ကျုပ်တို့က ကုလားတောထဲ နေနေတာ…
ဒီကော်မန့်လေးကို သံခမောက်ဆောင်း… သံဂျပ်ကာလေးဝတ်ပြီးရေးတယ်နော်… ခိခိ
တခြားဘာသာတစ်ခုက ၇၈၆ ဆိုပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးနေတာကို
အခုမှလိုက်ပြီး ၉၆၉ ဆိုပြီး အတုလိုက်ယူတာကိုတော့ အတော်သဘောမကျတဲ့ကိစ္စပါဗျာ…
သူ့ဟာကု ၇၈၆ ကို ကျုပ်တို့ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတွေက ၉၆၉ စရာမလိုဘူး…
ကျုပ်တို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်တွေမှာ “အရဟံ” ဆိုတဲ့စာရေးခဲ့တယ်ဆိုတာကို
သူများ နံပါတ် (၃)လုံးသုံးလို့ ကိုယ်ကလဲလိုက်ပြီး နံပါတ်(၃)လုံးသုံးတယ်ဆိုတာကြီးကတော့ ရုပ်ပျက်ပါတယ်…
ကျုပ်တို့လုပ်ရမှာက ၇၈၆ကို တိုက်ဖျက်ဖို့ ၉၆၉ လုပ်တယ်ဆိုတာထက်…
မူစလင်ဘာသာဝင်တွေ သူတို့ဘာသာအပေါ်မှာ သက်ဝင်ယုံကြည်ကြည်ညိုသလိုမျိုး…
ရင်ထဲမှာ သက်ဝင်ယုံကြည်မှုမခိုင်ပါပဲနဲ့တော့… ဘယ်လိုမှကာကွယ်လို့မရပါဘူး…
ကျုံးနဲ့မြို့ရိုးမခိုင်ပဲနဲ့ မြို့သိမ်းမှာကို တွေးပူနေလို့မရပါဘူး…
ကိုရီးဖက်ကက် နောက်က လိုက်ချင်ပါတယ်.. (အနော့်ကိုလည်း သံခမောက်ဆောင်းခွင့် ပြုပါ..)
ကျွန်မလည်း အဲ့ဒါကို သိပ်သဘောမတွေ့လို့ ဖွဘုတ်မှာတောင် အခုထက်ထိ မရှယ်မိသေးပါဘူး… ကိုယ့်ဘာသာကို တကယ်သက်ဝင်ယုံကြည်ဖို့ပဲ အဓိကလို့ ထင်ပါတယ်… ကျွန်မအမြင်တော့ အတော်များများက မိရိုးဖလာဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်နေလို့သာ အခြားဘာသာရဲ့ ထိုးနှက်မှုကို လွယ်လွယ်ခံရတာလို့ ထင်ပါတယ်…
ကျွန်တော်လည်း နောက် ကနေ လိုက်ပါတယ် ။
ဖက်ကက်နဲ့ မွန်မွန် နောက်ကမို့ သံခမောက် မလိုလောက်ဘူးထင်တယ် … :hee:
We(Buddhism) should use any ways to protect our religion without insult other religion.
Eg. Buddhism in Indonesia, Afghanistan and so on are disappear because of people’s ignorance.
ကျုံးနဲ့မြို့ရိုးကိုပဲ ခိုင်အောင်လုပ်ကြပါဗျာ… ha ha
ဒီပြသနာက ဘာသာရေးကို နွယ်လာတဲ့ အမျိုးသားရေးပြသနာလို့ မြင်ပါတယ်။
even ကျုံးနဲ့မြို့ရိုး is very strong, the doors like “ignorance” “shortsighted” are open. You will fail like indo and afghan.
we must built stronger ကျုံးနဲ့မြို့ရိုး and same time we must close the doors like shortsighted and ignorance of the coming threads.
….1000 years curse….
ကိုယ်ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကို စွဲစွဲမြဲမြဲ ယုံယုံကြည်ကြည် မိမိစိတ်မှ ဖြစ်နေဖို့က အဓိကလို့ ယူဆပါတယ်။
ဘာသာရေးနဲ့ ရောထွေးတဲ့ ပေါ်ပင်အလုပ်တွေကိုတော့ သတင်းအနေနဲ့ဘဲ ဖတ်လိုက်တယ် အားလည်းမပေးသလို ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချမှု့လည်း မလုပ်ဘူး၊ သူတို့သဘော သူတို့ဆောင်၊ ကိုယ့်သဘော ကိုယ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့ဘဲ ထားလိုက်တာပါ။
အခုတလောတော့ ပိုစ့်ပါကိစ္စက ဟော့နယူးလိုဘဲလေ။
ကျွန်တော်လဲ အမှန်တော့ ၉၆၉ ဆိုပြီးကပ်တာကို သဘောသိပ်မကျပါဘူး…အရင်တုန်းကလို အရဟံ တို့…ဗုဒ္ဒံ ဓမ္မံ သံဃံ တို့ဆိုပြီးကပ်တာ ပိုသဘောကျပါတယ်…ဒါပေမယ့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ…ကိုယ့်ဘာသာဝင်တွေ ဆိုင်အားပေးရတာ ကျန်တဲ့ဘာသာဝင်ဆိုင်တွေ အားပေးရတာထက်တော့ အားပေးသင့်တယ်ထင်တာပဲ…ဟိုတနေ့ကလဲ ကလေးအတွက် ကလေးဆိုင်ကယ်လေး ၀ယ်မလို့ ပထမ ဗုဒ္ဒဘာသာဆိုင် သွားမေးတယ်…၂၅၀၀၀ တဲ့…နောက်တဆိုင် ထပ်မေးတယ်…၂၅၀၀၀ ပဲ…ဆိုင်မှာကပ်ထားတာ အဲ့တော့မှ ကြည့်မိတယ်…၇၈၆ တဲ့…မိန်းမကတော့ အရင်ဆိုင် ပြန်မသွားပဲ ဒီ ၇၈၆ ဆိုင်မှာပဲဝယ်တော့မလို့တဲ့…ဇွတ်ဆွဲခေါ်ပြီး အရင်ဆိုင်မှာပဲ ပြန်အားပေးလိုက်တယ်…မြို့ဟိုဘက်ထိပ် ဒီဘက်ထိပ်ဆိုတော့ ဆီတော့ တော်တော်ကုန်သွားတယ်…ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ…တက္ကသိုလ်တက်တဲ့ တလျှောက်လုံး ဟာ့ခ်ျခေါက်တုံ့ ခေါက်ပြန်ကောင်နဲ့ တခန်းထဲ နေလာတာ…သူတို့ကြော နောကြေနေပြီးသား…ဗုဒ္ဒဘာသာဆိုင် တခါမှ သွားစားတာ သွားဝယ်တာ မတွေ့ဖူးဘူး…ဗုဒ္ဒဘာသာတွေပဲ ၇၈၆ ဆိုင်တွေမှာ တရုံးရုံးအားပေးနေကြတာ…..တနေ့နေ့တော့ ဒီအတိုင်းဆက်သွားရင် ဒုက္ခရောက်ကြတော့မယ်နော…ဘာသင်္ကေတပဲဖြစ်ဖြစ် ဗုဒ္ဒဘာသာ သင်္ကေတဖြစ် အားပေးတယ်ဗျို့…ဒီလို ကန်ပိန်းတွေကို…
— Comment deleted by Admin —
ကိုယ်တိုင်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာပေမယ့် ……
သူများကို လိုက်ပြီး တုပထားတဲ့ ၉၆၉ ကို သဘောမကျဘူး။
ကြောင်ဝတုတ်ပြောသလို အရင်ကတည်းက အရဟံ ဆိုပြီး ရေးကြတာရှိတာပဲ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ရင်ထဲမှာ ဘုရားတည်ဖို့
ရင်ထဲကနေ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်သာသနာကို မြတ်နိုးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် မြေသြဇာထည့်တာ မြေတောင်မြောက်တာနဲ့ တူတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှု့တွေးခေါ်မှု့ ခံယူချက် တွေဆိုတာက မျိုးစေ့ပါ
အဲဒီမျိုးစေ့ကမှ နေ့စဉ်ပြုမူလုပ်ဆောင်မှု့ဆိုတဲ့ အပင်ပေါက်အသီးသီးတာဆိုတော့……..
ကျုပ်တို့ဗမာတွေကတော့ သူတို့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ အလုပ်သမားတွေအဖြစ် အသုံးတော်ခံပါတယ်။
ငွေလေးဘာလေး ထုတ်ပေးတဲ့ရက်ကျတော့ ဒန်ပေါက်လေး ၀ယ်စားကြတာပေါ့…။
မြန်မာ့ အုန်းထမင်းနဲ့ ကြက်သားဟင်း ချဉ်ပေါင်ကြော် လေးလား….
ရောင်းပြန်တော့ ဘယ်မြန်မာမှ (မကောင်းလို့) ၀ယ်မစားပြန်ဘူး…..။
Minn Zin says:
အေးဗျ.. အပြင်မှာလဲ သူများလုပ်လို့လိုက်လုပ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့.. အသံတွေကြားနေရတယ်.. ဒါပေမယ့် ဘယ်နည်းလမ်းကိုပဲသုံးသုံး အဓိကက ကိုယ့်အမျိုး ဘာသာ သာသနာကိုကာကွယ်ဖို့ပါပဲ.. ပေါ်ပင် လိုက်လုပ်တယ်ပဲပြောပြော လမ်းဟောင်းကြီးလိုက်တယ်ပဲဆိုဆို အားလုံးဟာ ဘာသာ သာသနာ အတွက်လုပ်နေတာပါ..
ဒီလိုလှုံ့ဆော်မှုမျိုးမလုပ်ပဲနဲ့ ငြိမ်နေခဲ့ကြလို့၊ ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ ယုံကြည်နေရင်ရပြီဆိုပြီး တင်းတိမ် နေခဲ့ကြလို့ အခုဆို ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အခြေအနေက စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်လာပါပြီ… အခုဆို နောက်ကျနေပါပြီ ဒါပေမယ့် သေချာလိုက်ရင်တော့ မှီနိုင်ပါသေးတယ်.. ဘာမှမလုပ်ပဲ ဒီအတိုင်းပဲ ပစ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ နောင် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ အတွင်း မြန်မာ့မြေမှာ ဗုဒ္ဓသာသနာ ပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်
ထိုးစစ် မှသည် ခံစစ် ဖြစ်မလာစေနှင့်
တို့ဘုရားသာသနာက “ထိုးစစ်” နဲ့ တက်လာခဲ့တာ “ခံစစ်” နဲ့ မဟုတ်ဘူး။
တိတ္ထိ ဆရာကြီးတွေရဲ့ ၀ါဒတွေ လွှမ်းမိုးခဲ့ကြတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ တို့ဘုရားက ပွင့်လာတယ်။
ယုတ္တိရှိတဲ့ တရားတွေ သဘာဝကျတဲ့ ဓမ္မတွေ
လက်တွေ့ ဆန်တဲ့ ကျင့်ကြံမှုတွေကို ဟောပြတယ်။
အဲဒီလို နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ညံ့ညံ့လာလေလေ
ဟိုတုန်းက ထိုးစစ်ကြောင့် နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတဲ့ ၀ါဒတွေက ပြန်ပြီးလွှမ်းမိုးလာလေ ဖြစ်တော့တာပေါ့။
ဒီအတိုင်းသာ ကြောင့်ကြမဲ့နေကြရင် ကုန်ဖို့ပဲ ရှိတော့တယ်။
ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို ကြောင့်ကြမဲ့လည်း နေသေး ဆိုရင် တော်ကြပါ့မလား။
ဗုဒ္ဓ၏ဓမ္မအမွေများ ( စာမျက်နှာ -၈- )
သံခမောက်တော့ ဖွတ်တီးကတ်ဘတ်သွားလို့ မဆောင်းတော့ပေမယ့် …. . နားကိုက်ရင် ပါးပြန်ရိုက်တတ်ပါတယ် အရပ်ကတို့ …. ။ (အလကားပြောဒါပါ … ခိခိ :mrgreen:) ကျွန်မရဲ့ ဖြုတ်ဦးနှောက် ဥာဏ်နဲ့ ၊ မမှီမကမ်းရေးပါဦးမယ် ။
သူများယောင်လို့ လိုက်ယောင်ပြီး ၊ အမြီး မတည့် ခေါင်းမတည့်တွေ စွပ်စွပ်အော်နေကြတာ ဖွဘုတ်မှာကတည်းက ချဉ်နေတာပါ ။အဆီမလျော့ အသားမလျော့တဲ့ … လေအားဖြင့်တော့ ပွားလို့ကောင်းတာပေါ့လေ ။
ယုံကြည်စိတ်နဲ့ ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘာသာ တစ်ခုကို ၊ ဘယ်သူကမှ မိမိဆန္ဒမပါပဲ ပျောက်ပျယ်သွားအောင် လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး ။ကိုယ့်ဘာသာကို ပြန့်ပွားစေချင်လျှင် နောက်ဂျန်နရေးရှင်းအတွက် ယုံကြည်သက်ဝင်မှု ရှိအောင် နားလည် လက်ခံအောင် ၊ လက်ဆင့်ကမ်းပြီး ၊ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အသိမျိုး လေ့ကျင့် ရိုက်သွင်းပေးခဲ့ရပါမယ် ။ လုပ်သင့်တာမလုပ်ပဲ တောအော်တောင်အော် လုပ်နေတာကသာ waste of time လို့ မြင်ပါတယ် ။
ဒီ sticker ကပ်တဲ့ ကိစ္စကလည်း ဘယ်ပရင်းတင်း ပိုင်ရှင်က စတန့် ထွင်လိုက်တယ်မသိဘူး ။အတော်လေးတော့ အလုပ်ဖြစ်သွားတယ် ။ 969 ပဲ ကပ်ကပ် .. အရဟံပဲ ကပ်ကပ် .. ဒါလုပ်လိုက်တာက …သာသနာကို ထိန်းသိမ်းတာလား ၊ လူမျိုးကို ထိန်းသိမ်းတာလား .. ။ အဲ့ဒါတွေထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရော ထိရောက်မှုရှိတဲ့ လုပ်ရပ် ဟုတ်ပါရဲ့လား ။ တလောက အသံကြားပါသေးတယ် ။ ကပ်တဲ့ လူကပ်တာကို ခွာတဲ့ လူကလည်း လိုက်ခွာသတဲ့တော် ….အတော်လေး အားနေကြပုံပဲ ။ ကိုယ့်အိမ်မှာ ၊ ကိုယ့်ဆိုင်မှာ ကိုယ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိုယ့်နေရာမှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် 969 ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ 786 ဖြစ်ဖြစ် ၊ အန်းဂရီးဘတ်ဖြစ်ဖြစ် ၊ ပါဝါရိမ်းဂျားဖြစ်ဖြစ် ကပ်ချင်တာကပ်တာ ဘယ်သူကမှ ပိုင်စိုးပိုင်နင်းခွာပစ်လို့ မရဘူးလေ … ။ ဒါကို ခွာလို့ စိတ်ဆိုးတာ ဖြစ်သင့်ပါတယ်… ဒါပေမယ့် .. ဘာသာရေးတွေ ၊ လူမျိုးရေးတွေဘက်တိမ်းပြီး .. ဘယ်ဘာသာဟာကို ဘယ်က ခွာပစ်လိုက်တယ်တွေ လုပ်နေတာကတော့ … လူထုအုံကြွမှုဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ပဲ မြင်မိပါတယ် ။
အမှန်တစ်ကယ် လို အပ်နေတာက
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အချင်းချင်း ပြန်လည် ညီညွတ်ပေါင်းစည်းလာရေး
အဲဒီ စိတ်ဓါတ် ကို ပြန်လည် တည်ဆောက်နေတာမို့ 
ဖေ့ဘုတ် မှာ ရှဲတယ် ၊ ဖြန့် တယ်
ဆန္ဒပြ ဖို့ ဘယ်သူမှ မပြောဘူး မအော်ဘူး
ဖျက်ဆီး ဖို့ ဘယ်သူမှ မအော်ဘူး မပြောဘူး
ကိုယ်တိုင်လဲ ကုလားနဲ့ မကင်းနိုင်သေးတာတွေ ရှိနေပါတယ်
အခု ဖြစ်နေသော ၉၆၉ ကို
ကိုယ့်ဘာသာဝင်ချင်းချင်း အားပေးရေး စိတ်ဓါတ် ကို ဦးတည်နေတာမို့ 
အခု လို မျိုး ကွန်မင့်နဲ့ အတူ သဘောထားလေး သိရပြီ ဆိုတော့
969 campaign is nothing wrong because they do their way and you can also do your way. No need to complain/blame (Bay Htai Bu Pyaw).
Sure is We must do something right now.
အရဟံ ပဲရေးရေး၊ ဗုဒ္ဒံ ဓမ္မံ သံဃံ ပဲဆိုဆို၊ ၉၆၉ ပဲပြောပြော။ ဒါ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ညွှန်းတဲ့အတွက် အားလုံးလက်
ခံလို့ရတယ်။ ဘာနဲ့ဖော်ပြတာအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုရင်တော့ ဗုဒ္ဒံ ဓမ္မံ သံဃံ ကိုပိုသဘောကျတယ်။ အဲ့ဒါထက်ထိထိမိမိနဲ့ တိုတာဆိုရင်တော့ အရဟံပေါ့။ ဒီကိစ္စကို လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ ကိစ္စလို့မြင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများဆုံးနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံပါ။ အားလုံး သတိထားမိသွား
အောင်တော့လုပ်သင့်တယ်လို့ ယုံကြည့်ပါတယ်။ အားလဲအားပေးပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လဲ အတပ်နိုင်ဆုံးကျင့်
သုံးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုပေ ပြောသလိုပဲ အလုံးစုံတော့မကင်းနိုင်သေးပါဘူး။ ဒီအတိုင်းသွားနေရင်တော့ သိပ်
အရေးကြီးတာက ကိုယ့်အသိနဲ့ကိုယ် တခုခုတော့ တကယ်လုပ်ဖို့ပဲ….။
သာသနာ ကွယ်တော့မယ်လို့ဘဲ တစိုက်မတ်မတ်ထင်နေကြတာ အကြောင်းအရင်းတော့ ရှိနိုင်ကောင်းပါရဲ့။
သာသနာသက္ကရာဇ် ၂၅၀၀ကျော်ရင် ဘာဖြစ်မယ် ညာဖြစ်မယ် ကြားထားဘူးတော့ စိတ်ထဲစွဲနေတာလဲ ဖြစ်နိုင်တာဘဲ။
တချို့လဲ ကမ္ဘာပျက်ကိန်းနဲ့ရောယောင်ပြီး အမှတ်မှားနေကြတယ်။ တချို့ကျတော့လဲ မာယာလူမျိုးပြက္ခဒိန်ထဲမှာပါတဲ့ အယူအဆဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုကြပြန်တယ်။
ဆိုတော့ သာသနာဘယ်ချိန်ကွယ်မလဲဆိုတာ အတိအကျမှတ်တမ်းတင်ထားဘူးတာမျိုးရှိရင် ပြောကြပါအုံးလို့…
ကြားဖူးတာကတော့ သက္ကရာဇ် ၂၅၀၀ အထိက ဘုရားသာသနာတဲ့… ၂၅၀၀ ကျော်ရင် သိကြားသာသနာ…
ဘယ်အချိန်ကြရင် ကော်ဖီမှုန့်သာသနာတို့… ကက်ပူချီနိုသာသနာတို့ဆက်မလဲတော့မသိဘူး…
၉၆၉ တို့ အရဟံတို့ဆိုင်တွေမှာပဲဝယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းတယ်…
ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့တခြားဘာသာဝင်တွေကို ဖိနှိပ်ဖို့ကြံတယ်… သူတို့ဖိနှိပ်တယ်၊ မနှိပ်ဘူးခဏထား…
အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ မူစလင်ဘာသာဝင်ကို နှင်ထုတ်ဖို့အထိပြောနေကြတယ်…
ကျုပ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဂဏန်းသုံးလုံးလဲတပ်ပြီးပီ…
ကိုယ့်ဘာသာမဟုတ်တဲ့ တခြားဘာသာတစ်ခုကိုလဲ နိုင်ငံထဲမှာအမြစ်ဖြတ်နှင်ထုတ်ချင်စိတ်တွေပြည့်နေပြီ…
ကျုပ်တို့ ဘာတွေနဲ့တူနေပြီလဲ… ဘယ်သူတွေနဲ့ တစ်တန်းထဲဖြစ်နေပြီလဲ…
အမှန်တော့ ဟိုးဘက်က ဆင်တူယိုးမှား ပို့ စ် မှာလည်း ပြောပီးသွားပါပီ……………..
လုပ်သင့်တာနဲ့လုပ်နေတာနဲ့ တော့ လွဲတော့နေပါပီကွယ်…….
၉၆၉ ဆိုတာ မူဆလင်ကုလားကို မုန်းတိးလို့၊သတ်ဖို့ ဖြတ်ဖို့ အတွက်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူး အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာ မပျောက်ရလေအောင်
ကာကွယ်ဖို့အတွက် ပေါ်လာတာပါ။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ကုလားနဲ့တရုပ် လူလည်လုပ်လာတာ နှစ်အတော်ကြာခဲ့ပြိ၊ မြန်မာတွေရဲ့ စိးပွားရေးလာဘ်
မမြင်မှူကို အခွင့်အရေးရယူပြိး နေရာတကာစိးပွားရေးလုပ်လိုက်တာ အရင်က ကွမ်းယာဆိုင်လေးမှာ အိပ်စားလုပ်နေခဲ့တဲ့ ကုလားတောင် အခု
တိုက်ကြိးဟိးနေပြိ။ဒါပြဿနာ မဟုတ်ဘူး၊ ပြဿနာက မူဆလင်ရဲ့ အနှစ်သာရပဲ၊ မူဆလင်က ဘာသာမတူရင် ရန်သူသတ်မှတ်တယ်၊ မူဆလင်
အယူဝါဒ လွှမ်းမိုးတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာ အခြားဘာသာဝင် မရှိသလောက်ရှားတယ်၊ဖိနှိပ်တယ်၊သတ်တယ်။ အားသာရင် အားသာသလိုလုပ်တယ်၊
အားမသာသေးရင် ကုလားအုပ်လိုကျင့်တယ်။လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရန်ကုန်၊့မန်းတလေး မြို့ကြိးတွေမှာ အင်အားနည်းသေးလို့ ငြိမ်နေသေးတာ
ဖြစ်တယ်၊ရခိုင်မှာဖြစ်ခဲ့တာကိုကြည့်ပါ။ပလိတွေ ရသလောက် ခိုးဆောက်တယ်၊ဒါသူတို့ရဲ့ ခံတပ်တွေပဲ၊ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြပြိး အခြား ဘာသာဝင်တွေ ပျက်စိးရာပျက်စိးကြောင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတယ်။ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေကို ပစ်မှတ်ထားပြိး လူသားဖေါက်
သာသနာပြုတယ်။အရင်ကသည်လောက် မဆိုးခဲ့ပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ မူဆလင်ကုလားတွေ တော်တော်ဆိုးလာတာကို မြန်မာဗုဓ္ဗဘာသာဝင်
တွေနဲ့ ရဟန်းတော်တွေသိလာတယ်၊ဒါကြောင့် ၉၆၉ ဟာ အမျိူးသားရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်အနေနဲ့ ပေါ်ပေါက်လာရတာဖြစ်တယ်။ မူဆလင်တွေ
အင်အားချိနဲ့သွားစေမဲ့ National Campaign တစ်ခုဖြစ်လို့ ကျနော်ကတော့ အားပေးပါတယ်။အခုဆို ကျနော်ဈေးဝယ်ရင် ၇၈၆ ဆိုင်လုံးဝ မဝယ်
တော့ပါဘူး မြန်မာဆိုင်ပဲအားပေးတယ်၊ကုလားဆိုင်ဆို ကွမ်းတောင်မစားတော့ဘူး၊ ကုန်ကုန်ပြောရင် အလကားစားရတဲ့ အလှူမှာတောင် ဒန်ပေါက်ဆိုရှောင်လိုက်ပြိ။ဒါကလည်း နောင်လာမည် ကျနော်တို့ရဲ့ သားမြေးတွေကို မူဆလင်ကုလား အနိုင်ကျင်ဖျက်ဆိးတာ မခံချင်လိုပါ။
အစကတော့ မပြောဖူးလို့ နေမလို့ ကွယ်… အခုတော့ တက်နိုင်ဝူး….
၉၆၉ ဆိုတာ မူဆလင်ကုလားကို မုန်းတိးလို့၊သတ်ဖို့ ဖြတ်ဖို့ အတွက်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူး
မူဆင်လင်ကုလားသည် တဦးတည်းသော ရန်သူမဟုတ်ပါဖူး…… သူတို့ ဆိုးတာ လက်ခံပါတယ်…. ဒါကို ကာကွယ်ဖို့တခြားနည်းလမ်း အများကြီးရှိပါတယ်….. ဒါဟာ တခုတည်းသော ထွက်ပေါက်မဟုတ်ပါဖူး…. ဒါပေမယ့် အခုလိုလုပ်တာဟာ ဗုဒ္ဒဘာသာကို အကျဉ်းတန်စေတယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်း သတိထားသင့်ပါတယ်……
ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ကုလားနဲ့တရုပ် လူလည်လုပ်လာတာ နှစ်အတော်ကြာခဲ့ပြိ၊မန်မာတွေရဲ့ စိးပွားရေးလာဘ်
ကျွန်တော်လည်း ဗမာပဲ…. ဒါပေမယ့် ဘွင်းဘွင်းပဲပြောမယ် ကိုယ့်လူ…. ကုလားနဲ့တရုတ်က လူလည်လုပ်မှာပေါ့… ဗမာအများစုကညံ့တာကိုး…. တထစ်ရှိကြိုးစားမယ်မကြံဖူး… အမွေရမယ့် ဟာကို ထိုင်စောင့်တယ်…. ၁၀၀ ရရင် ငါးဆယ်ထိုင်းစားတယ်…. အချောင် ရသမျှယူတယ်…. ညံ့ကြေးပြောမယ်ဆိုရင် အဘဖော(Foreign Resident) ကိုသာ သွားမေးကွယ်… ဗမာတွေညံ့တာ သူအသိဆုံး………..
ပြဿနာက မူဆလင်ရဲ့ အနှစ်သာရပဲ၊ မူဆလင်က ဘာသာမတူရင် ရန်သူသတ်မှတ်တယ်၊ မူဆလင်
မှန်ပါတယ်… မွတ်ဆလင်မှာ အဲ့လို အစွန်းရောက်တွေရှိလို့ လဲ… တကမ္ဘာလုံးမှာ သူတယောက်တည်း ငပွကြီး ဖြစ်နေတာပေါ့…. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ပြသာနာက အဲ့ဒါတခုတည်းမကဖူး… တခြားအများကြီးလဲ ရှိသေးတယ်…. ကိုကြောင်ဝတုတ် ပြောသလိုပဲ တံတိုင်းကိုခိုင်နေအောင်ဆောက်ရမယ်…. တံတိုင်းတင်မကဖူး… စက်သေနက် တပ်သင့်လည်း တပ်ရမယ်…. ဒါဟာ သူများကို ကျူးကျော်ဖို့ မဟုတ်ဖူး… ကာကွယ်ဖို့ …..
နောက်ဆုံးခြုံပြောမယ်… မိန်းကလေးတွေကို အနိုင်ကျင့်တဲ့ကိစ္စ…. သူတို့ ဘာလို့ အနိုင်ကျင့်ခံလဲ… ခံချင်လို့ များ ခံနေတယ်လို့ ထင်နေလား… ခင်ဗျား သာ အဲ့မိန်းကလေးမှာ နေရာသွားနေကြည့်… ဟိုက ပိုက်ဆံ မက်လောက်စရာသာ မပေးရင် အသားတောင် အထိခံမှာမဟုတ်ဖူး….. အကျွေးတွေ ပိနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေ… ဒုက္ခ ပင်လယ်ဝေနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေ အဲ့လို့ မိန်းကလေးတွေကို ကယ်တင်ဖို့Funds တွေ လိုတယ်…. Project တွေ လိုတယ်…. နောက်ဆုံး မဟုတ်တာ လုပ်မှ အသက်မွေးလို့ ရမယ်ဆိုရင် အနိုင်ကျင့် မခံရအောင် မတရားအလုပ်မခံရအောင် ဥပေဒ ဘောင်အတွင်း ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးရမယ်…. တခြားသူမပြောပါနဲ့ … တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းပဲကြည့်ပါ…. ယောကျာင်္းလေးတွေက မိန်းကလေးတွေကိုတွဲတယ်.. ဖောက်ပြန်တယ်…. နောက်ရီးစား နောက်မိန်းမ ကွယ်ရာ မကွယ်ရာ ရှုပ်တယ်…. ဒါတွေရှိနေရင် တခြားသူတွေကလည်း ရှုပ်မှာပေါ့…… ပြောရင် ကုန်တောင် မကုန်ဖူးကွယ်…..
မွတ်ဆလင်ကို မမုန်းပါနဲ့ လို ပြောတာမဟုတ်ပါဖူး….
မုန်းလို့ ရပါတယ်…. ဒါပေမယ့် အဲ့အမုန်းတရား ဖြစ်လာတဲ့ ရင်ထဲမှာ ပိုမမောဖူးလား…..
ဗုဒ္ဒဘာသာလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံယူထားရင် မာန်နတ်ကိုတောင် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သည်းခံခြင်း မေတ္တာ တရားတွေ ဘယ်ပျောက်ကုန်ပီလဲ……….
အဲ့လို အမုန်းတရား ပွားမယ့်အစား… ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ အချိန် စွမ်းအင် ပိုက်ဆံ အားလုံးကို ကျန်ရှိနေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေကို ဘယ်လို ကောင်း အောင် လုပ်မလဲဆိုတဲ့ အတွက် ပိုပီး အချိန်ပေးလိုက်ရင် အကျိုးရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်……